Current filter: 40 found
The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw acknowledges the Japanese House of Representatives’ decision to condemn the military coup in Burma
June 10, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပေးပို့ခြင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်( ၁၁ )
April 16, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
March 26, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ကြေညာချက် အမှတ် ( ၉/၂၀၂၁ )
February 23, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw Annonuncement No. (8/2021)
February 21, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
February 20, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw-CRPH) မှ (၇၃) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ
PPST အထူးအစည်းအဝေး၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က လေးလေးနက်နက်ထောက်ခံ ကြိုကြောင်း ကြေညာချက် အမှတ် ( ၇/၂၀၂၁ )
February 17, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများအဖွဲ့က CRPH ထံ ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်ပေးပို့၊ နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်နက်စွဲကိုင်၍ သိမ်းယူထားခြင်းသည် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၂ (၁)အရ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကို သစ္စာဖောက်ဖျက် ပုန်ကန်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်
February 15, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ပြင်ဆင်ထုက်ပြန်လိုက်သော နိုင်လွှတ်လုံဥပဒေနှင့် ရပ်ကျေးဥပဒေ နှစ်ရပ်လုံးသည် တရားမဝင်သည့်အတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာရန်မလိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ထုတ်ပြန်
February 14, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအား တာဝန်ခံစေရန် အကြောင်းကြားခြင်း
February 13, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
(၇၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ သဝဏ်လွှာ
February 12, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
February 11, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) Declaration No. 3/2021
တရားမဝင် အာဏာသိမ်းမှုအတွက် နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက် ရှာသည့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် တောင်းဆို
February 10, 2021 • Author: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw